Dhaqashada Geela ee Muqdisho & Caano Saafi ah oo looga maarmay kuwa Dibadda | KEYDMEDIA ONLINE
Dhaqashada Geela ee Muqdisho & Caano Saafi ah oo looga maarmay kuwa Dibadda
Keydmedia Online — Muqdisho waxaa Bilooyinkii ugu dambeeyay ka hirgalay Mashaariic dhanka Wax soo saarka Xoolaha looga faa'ideysto, taasi oo ay herheliyeen Ganacsato Soomaaliyeed, waxaana Warbixintaan ku eegeynaa Mashaariicda laga hirgaliyay Duuleedka Caasimadda.
Xaruumo lagu xanaaneeyo Geelo ayaa Meelo kala duwan oo Caasimadda Muqdisho laga sameeyay, iyadoo ugu yaraan taasi ay hoos u dhigeysa in looga maarmo Isticmaalka Caanaha Warshadaysan ee laga soo dhoofiyp dalka dibadiisa.
Warbixintan waxaan ku eegeynaa sida Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho uga faa'ideysteen Mashaariicdan dhawaan soo ifbaxay ee ah in Geelii lagu yaqiinay Dhaqashadiisa la keeno Magaalooyinka dalka, sida Caasimadda Muqdisho.
Qeybaha kala duwan ee Shacabka Magaalada Muqdisho, ayaa si aad ah u isticmaala hadda Caano Saafi ah oo laga soo lisay Geelo lagu xanaaneeyo Duleedyada Muqdisho, oo iyagoo Dhaay/ Mac ah laguugu keenayo Goobtaada Ganacsi ama Gurigaaga.
Wax soo saarka Xoolaha Noolo, waxa uu kamid yahay Naf-dhabarka Dhaqaalaha dalka Soomaaliya, marka laga yimaado Beeraha & Ganacsiga, waxaana Sanadihii Colaadda dalka aan ka jirin Mashaariic sidan oo kale Caano lagu lisay Muqdisho agteeda ay Shacabka cabaan.
Caanaha lagu cabi jiray Muqdisho, ayaa ahaan jiray kuwa laga soo lisay Xoolo ku sugan meesha ugu dhaw meel 30Km jirta Magaalada, balse Bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa taasi meesha ka saaray Shirkado si gaar ah loo leeyahay oo hindisay in Geela lagu dhaqaaleeyo Xaruumo ku yaalla Muqdisho.
Shirkadahan ayaa sameeyay Baabuur u gaar ah oo Caanaha Dadka ugu geeyay halka ay joogaan, sida Hoteelada, Maqaayadaha, Suuqyada & Xaafadaha, iyadoo Caanaha ay yihiin kuwa Tayo & Qiimo ahaan ka duwan kuwa Goobaha Fog ee Baadiyaha laga keeno.
Xasan C/raxmaan Sabriye, waxa uu kamid yahay Mulkiiliyaasha Shirkadaha Geelo ku xanaaneeya Muqdisho waxa Keydmedia Online uu uga warbixiyay sida ay ku timid Baahida ah in Mashruucan laga hergeliyo Caasimadda.
"Aniga waxaan kamid ahaa Dadka Caana laga keeno Baadiyaha ku caba Muqdisho, markaan arkay in Caanahaasi ay yihiin kuwa Gacmo kala duwan soo maray oo aan la isku halayn karin, ayaan ku fekeray in Shacabka ay helaan Caano hortooda loogu lisayo, misna ay ku kalsoon yihiin," ayuu yiri Sabriye.
Sabriye ayaa intaas ku daray in ay Muhiim tahay in Shacabka ay taageeraan Caanaha lagu lisay Deegaankooda oo aysan taageerin Ganacsatto Caanaha ka keenta Wadamada Carabta.
Mashruuc Dad badan Shaqooyin u abuuray
Shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ku tartamaya soo saarida Caanaha Geela ayaa Shaqooyin badan u abaaray Shaqsiyaad uu kamid yahay C/llaahi Xasan Cali oo Muqdisho ku leh Goob lagu iibiyo Caanaha laga soo lisay Geela lagu xanaaneeyo Duleedka Muqdisho.
C/llaahi Xasan Cali ayaa ka warbixinaya sida uu ugu faa'ideystay Mashruucan Cusub ee Dhaqashada Geela.
"Caanaha Dhaqaale aad u badan ayaa iga soo gala, markaan ka keeno Xarunta lagu liso waxaan geliyaa Qaboojiye (Freezer), si Tayada & Nadaafadda Caanaha u ilaaliyo oo mudo u ahaadaan Dhaay/Mac, waana sii iibinaa" ayuu yiri C/llaahi Xasan.
Shacabka Muqdisho, ayaa intoodu badan waxa ay qirayaan in aan la isku bar-bardhigi karin Dhadhanka & Waxtarka Caanaha lagu soo sameeyay dalka dibadiisa iyo kuwa hadda lagu liso Duleedka Muqdisho ee Saafiga ah.
Ibraahim Sheekh Maxamuud, waa Qof Macmiil (Client) u ah mid kamid ah Xaruumaha Caanaha Geela lagu iibiyo Muqdisho, waxaana uu is bar-bardhig ku samaynayaa Farqiga u dhaxeeya Caanaha hadda uu Cabo & kuwii hore.
"Farqi weyn ayaa u dhaxeeya oo micnihiisu yahay in Caano Geel ah oo sidii Allah u sameeyay aan laga heli jirin hadda kahor Muqdisho, waxay ahaan jireen Caanaha kuwa lasoo karkariya oo Caano Ari & Biyo lagu soo dara, oo aan Tayo wanaagsan lahayn, markaan helnay Caanaha ayaan ka reysanay Dhibkii hore," ayuu yiri Ibraahim.
Inta aysan Shirkadahan billaabin Mashruucan Dhaqshada Geela, Dadka Muqdisho waxa ay ahaayeen kuwa ku tiirsan Caanaha laga soo lisay Geel lagu dhaqo Gobolada Shabeellaha Hoose & Shabeellaha Dhexe, iyo sidoo kale kuwa lagu soo sameeyay Warshado ku yaalla Dalalka Dibadda (Caano Buuraha).